Vehicle Logistics Ceramic Tag, ယာဉ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF အီလက်ထရောနစ်လိုင်စင်ပြား, ISO18000-6B Logistics Ceramic Thick Card, Logistics UHF Ceramic Card, ယာဉ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကြွေလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို
ယာဉ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကြွေလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို, ယာဉ် Anti-disassembly RFID Tag ကို
အခြားအ Dedicated Tag ကို Car Anti-disassembly RFID Tag, ISO18000-6B Logistics Ceramic Thick Card, ISO18000-6C Logistics Ceramic Thick Card, Logistics UHF Ceramic Card, ယာဉ် Anti-disassembly RFID Tag ကို, Vehicle Logistics Ceramic Tag, ယာဉ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကြွေလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို, ယာဉ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF အီလက်ထရောနစ်လိုင်စင်ပြား
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: IEC / က ISO 18000-6B / 18000-6C
chip: ဂြိုလ်သား h3 သို့မဟုတ် Impinj M4 optional ကို
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF လှိုင်းနှုန်းအကွာအဝေး: 860~ 960MHz
အခြားအ frequency band Customize: LF / HF
Reading အကွာအဝေး: မတူညီတဲ့ frequency band အညီ
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20ကို C ~ + ကို 100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
ထုပ်ပိုးပစ္စည်း: ကြွေပြား + ကို ABS အိမ်ရာ
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 86× 54 × 3.5 mm / 89 × 57 × 3.5mm (4.2မီလီမီတာပေါင်းစတစ်ကာ)± 0.2mm
အလေးချိန်: 24.52± 0.03g
အဖုံး: 100PC များ / ကြွေထည်ပစ္စည်းကိုအထူးသေတ္တာ
installation နည်းလမ်း: ယာဉ်များ၏ဖန် window ထဲမှာကို double-တဖက်သတ်ကော်ငါးပိ
UHF Vehicle Logistics Electronic License Plate,atamper-evident electronic tags specially designed for vehicle management, hasabuilt-in composite ceramic substrate with high temperature resistance, တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို, and excellent readability when combined with automotive glass. This tag has the function of preventing illegal removal. Once the tag is removed from the windshield of the vehicle, the tag is broken and immediately becomes ineffective and cannot be reused.
Test reading and writing distance: In the air, the handheld reader can read about4မီတာ, 1W test. Fixed reader 1W, 7DB can read and write more than9မီတာ. Attenuation is slightly greater when reading inacar window withahandheld reader, and attenuation is small when reading withastationary reader.
I am interested in your product Vehicle Logistics Ceramic UHF Tag, ယာဉ် Anti-disassembly RFID Tag ကို
prev: PCB ပစ္စည်းအင်တင်နာ NFC ကို Tag ကို, PCB အင်တင်နာ RFID Tag ကို
နောက်တစ်ခု: RFID အမြင့်အပူချိန်အဝတ်လျှော် Tag ကို, RFID အမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Tag ကို, မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Epoxy ဗဓေလသစ် Tag ကို